Xinhua Myanmar - ဂါနာနိုင်ငံ သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ဂါနာနိုင်ငံ သမ္မတ ပထမဆုံးအကြိမ် COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ဂါနာနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ Mahamudu Bawumia (ရှေ့) အား COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူပြီးနောက် မတ်လ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ) WORLD
အက်ခ်ရာ၊ မတ် ၂ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဂါနာနိုင်ငံ သမ္မတ Nana Addo Dankwa Akufo-Addo သည် မတ် ၁ ရက်က ဂါနာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံသူဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပြည်သူလူထုကို သံသယရှင်းရှင်းနဲ့ လူတိုင်းကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်” ဟု သမ္မတ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးနောက် ပြောကြားခဲ့သည်။သမ္မတကတော် Rebecca Akufo-Addo လည်း ကာကွယ်ဆေးနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများ၏ သံသယကင်းရှင်းစေရန် သမ္မတပြီးနောက် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူနေသည့် ဂါနာနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ Mahamudu Bawumia (ရှေ့) အား မတ်လ ၁ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
“ဂါနာရှိလူတိုင်းအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သက်သောင့်သက်သာရှိသင့်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာ လူတိုင်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပြီးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်” ဟု သမ္မတ ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ဂါနာနိုင်ငံ ဒုတိယသမ္မတ Mahamudu Bawumia နှင့် ဇနီး Samira Bawumia တို့သည်လည်း COVID-19 တိုက်ဖျက်ရေး ပြည်သူလူထု ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေးတွန်းအားပေးရန် ရဲတပ်ဖွဲ့ဆေးရုံ၌ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ပြည်သူလူထုနဲ့ ဂါနာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံဖို့ စိတ်ချရစေဖို့နဲ့ ဒီကာကွယ်ဆေးကို ထိုးနှံကြဖို့ အခိုင်အမာပြောကြားဖို့ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ ဒီကာကွယ်ဆေးတွေကို ထိုးနှံမှုခံယူခဲ့တာပါ” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ပြည်သူများအနေဖြင့် အမျိုးမျိုးသော ဖန်တီးလုပ်ကြံပြောဆိုချက်များအား လျစ်လျူရှုလျက် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် စီးပွားရေးကို ကာကွယ်နိုင်ရန် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံကြရန်လည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ဂါနာနိုင်ငံသည် ပြီးခဲ့သည့်သီတင်းပတ်က AstraZeneca ကာကွယ်ဆေး ၆၀၀,၀၀၀ ကို လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပြီး မတ်လမှ ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ ပြည်သူ သန်း ၂၀ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံနိုင်ရန် လျာထားကြောင်း သိရသည်။
လူထုကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုလုပ်ငန်းကို နိုင်ငံတစ်ဝန်း ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရာနေရာ ၄၃ ခုတွင် မတ် ၂ ရက်တွင် စတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
Ghanaian president takes first COVID-19 vaccine in Ghana
ACCRA, March 1 (Xinhua)-- Ghanaian President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo became the first person to takeajab of the COVID-19 vaccine in the country on Monday.
"I decided to take it public to clear all doubts and urge everyone to also accept the vaccine," said the Ghanaian president before taking his jab.
First Lady Rebecca Akufo-Addo also tookajab following the president to clear public doubts about the vaccine.
"So everybody in Ghana should feel comfortable about taking the vaccine. It is important that everybody at the end of the day is vaccinated. That is our objective," the president added.
Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia and wife Samira Bawumia also took their turn at the police hospital to encourage the public to vaccinate against COVID-19.
"We are taking this vaccine today to assure the public and Ghanaians in general that it is safe to be immunized, to take this vaccine," he said.
He asked the people to ignore the various conspiracy theories and get vaccinated to protect them and the economy.
Ghana took delivery of 600,000 doses of AstraZeneca vaccine last week, and 20 million people are scheduled to be vaccinated between March and up till the end of the year.
The mass vaccination exercise is scheduled to commence on Tuesday in some 43 epicenters across the country. Enditem
1-(210301) -- ACCRA, March 1, 2021 (Xinhua) -- Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia (Front) shows his vaccination card after receiving the COVID-19 vaccine atahospital in Accra, Ghana, on March 1, 2021. Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia and wife Samira Bawumia on Monday took the vaccine to encourage the public to vaccinate against COVID-19. (Photo by Seth/Xinhua)
2-(210301) -- ACCRA, March 1, 2021 (Xinhua) -- Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia (L, Front) receives the COVID-19 vaccine atahospital in Accra, Ghana, on March 1, 2021. Ghanaian Vice President Mahamudu Bawumia and wife Samira Bawumia on Monday took the vaccine to encourage the public to vaccinate against COVID-19. (Photo by Seth/Xinhua)
Previous Article ဘောလုံးဘုရင်ပီလီ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ ၊ သတိပြုကြရန် တိုက်တွန်း
Next Article အိမ်ဖြူတော်မှ မထွက်ခွာမီ ဒေါ်နယ်ထရမ့်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခဲ့ဟု မီဒီယာပြောပြ